एमसीसी : ओर्जिनल सहमतिमा संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन, यो बीचमा कहाँबाट आयो – अध्यक्ष प्रचण्ड « Nepal Page
पुस ८, २०७८ बिहीबार
एमसीसी : ओर्जिनल सहमतिमा संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन, यो बीचमा कहाँबाट आयो – अध्यक्ष प्रचण्ड
नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको कार्यदिशामा ठुलो परिवर्तन आउने बताउनु भएको छ । २०६९ सालमा हेटौडामा भएको महाधिवेशनले लिएको नीति र कार्यदिशा समग्रमा लागु हुन नसकेकोले र देश भित्र भएका राजनैतिक परिवर्तनले नयाँ कार्यदिशा तय गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमा पार्टीको स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्ने बताउनु भयो। अहिले नेपालको राजनीतिमा तातो विषय बनेको एमसिसि बारे संसोधन गरेर मात्र अगाडी बढ्न सकिने बताउनु भयो । एम्सिसिको केहि दस्तावेजमा भएका प्रावधानले संशय पैदा गरेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संसोधन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्रस्तुत छ न्युज एजेन्सी नेपालले अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
हेटौँडा महाधिवेशमा हामीले एकातिर समाजवादतिरको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्ने कुरा गरेका थियाँै । अर्कोतिर उत्पादन वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेर हामीले उत्पादन ब्रिएडको अवधारणालाई पनि त्यतिबेला प्रश्तुत ग¥यौं । त्यो प्रारम्भिक चरणमा थियो । समाजवादतिरको यात्राको सम्बन्ध पनि, उत्पादन ब्रिएडसम्बन्धि समग्र अवधारणा पनि । त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदा देशको राजनीति घटनाक्रम पनि धेरै अगाडि गइसक्यो । हाम्रो पार्टीको एकता प्रक्रिया, विभाजनको प्रक्रिया, यी तमाम घटनाक्रमहरुले पनि हामीलाई नयाँ ठाउँमा लगेको छ ।
मैले अब २१ औँ शताब्दीको यो अहिले हामी तेस्रो दशकमा अघि बढीरहँदा अब पार्टीले समाजावदी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत समाजवादोन्मुख समृद्धिको कार्यनीति भनेको छु मैले । त्यो मातहतमा हामीले अब ठोसरुपमा नै स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक र राष्ट्रियतहसम्म केन्द्रित तहसम्म पनि हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने एक, समुदायको हकअधिकारलाई स्थापित गर्ने, प्रकृतिमाथि, प्राकृतिक श्रोत,साधनमाथि स्थानीय जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्ने कुरा त्यहाँ व्यापक सामुदायिक मोर्चा बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने र जनताको जो चाहना छ समृद्धिको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरा । प्रादेशिक र राष्ट्रिय मुद्दामा पनि केन्द्रित भएर हामीले छिटो भन्दा छिटो, राम्रो भन्दा राम्रो, उपायद्वारा आर्थिक विकास गर्ने, भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित छ, एक । दास्रो, अहिलेको युग भनेको बास्तवमा सूचना प्रविधिको क्रान्ति भयो । डिजिटलकै युग भनिन्छ । उकातिर ग्लोबलाइजेशन, भूमण्ण्डलीकरण, अर्कोतिर डिजिटलाइजेशन, अब यो सूचनामा भएको प्राविधिक क्रान्ति । यो दुई वटा कुराले अत्यन्त सकारात्मक योगदान गरेको छ उत्पादक शक्तिको विकासमा ।
समाजवादको वस्तुगत आधार पनि यसले तयार पारेको छ । तर यो पूँजिपतिहरुको हातमा छ । सबै उत्पादनका साधनहरु पूँजिपतिको हातमा हुनको कारणले ठूला समस्या पनि मानव जातिले भोग्नुपरेको छ । पर्यावरण विनाशको समस्या, कार्बन उत्सर्जनका कारणले जलवायु परिवर्तनको समस्या, पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने समस्या, समुन्द्रको सतह बढ्ने समस्या, जस्ता राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरु छन् । र यो समस्या धर्तीमा किन आयो ? अहिले समुन्द्रका थुप्रै प्राणीहरु त्यहाँका जलचर, मर्ने, लोप हुने स्थिती बन्यो । हाम्रा जडिबुटी थुप्रै अब नष्ट हुने स्थिती आयो । हाम्रा स्थानीय नश्लका जीवजन्तुहरु थुप्रै लुप्त हुने स्थिती पैदा भयो । के कारणले ? यसको जवाफ पनि हामीले दिनुपर्छ भनेर । अहिले विकास र समृद्धिको यात्रासहीत हामीले प्रकृतिको संरक्षण, मानव जातिको संरक्षण, पर्यावरणको संरक्षणको मुद्दालाई स्थानीय स्तरमा पनि उठाउनु पर्ने देखेको छु मैले । त्यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कम्युनिष्टहरुले र समाजवादीले मात्रै यो धर्तीको रक्षा गर्न सक्छन्, आर्थिक विकासलाई योजनावद्ध ढंगले प्रकृतिलाई विनाश नगरीकन, जीवजन्तु र पर्यावरणलाई विनाश नगरीकन, समुन्द्रको पनि संरक्षण गर्ने गरी विकास गर्न सक्ने भनेको कम्युनिष्ट र समाजवादहरुले मात्रै हो भन्ने कुरालाई मैले प्रमाणित गर्न खोजेको छु अहिले । अहिले मेरो नयाँ कुरा भन्नुहुन्छ भने मुख्यतः यसमा केन्द्रित हुनेछ ।
हाम्रो संविधान र अहिलेको प्रणालीले एकातिर राजनैतिकरुपमा समाजवादोन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको छ र त्यहाँ हामीलाई नयाँ एउटा संरचना खडा गर्ने आधार त्यसले निर्देशन दिएको छ । आर्थिक रुपले उसले निजी, सार्वजनिक र सहकारीको समायोजनमा नेपालको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र बढाउने भनेर पनि भनिएको छ । त्यसले पनि आधार दिएको छ । त्यसैगरी जनताका केही मौलिक अधिकारको प्रश्नमा यसरी परिभाषित गरिदिएको छ, कि त्यसले सबैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार हुनेछ भन्ने कुरा पनि गरेको हुनाले संविधानको मुलभुत मान्यतामा टेकेर तपाईले भनेको जस्तो पूँजिलाई ठीक ठाउँमा सदुपयोग गर्ने सम्भावना दिएको छ । संविधानको त्यो आधारमा टेकेर ऐनहरु निर्माण गर्ने, ऐनहरु संशोधन गर्ने र पूँजि जनताको हातमा ल्याउने, किनभने हाम्रो आजको मुलभुत समस्या भनेको एउटा राष्ट्रिय पूँजिको विकास भएको छैन । स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास भएको छैन । अर्थतन्त्रमा दलाल भन्छौँ हामीले, दलाल पूँजिवादको वा त्यस्ता तत्वहरुको जसले खालि बाहिरको सामान ल्याउने र कमिसन खाने खालकाहरुको हातमा नै बढी अर्थतन्त्रको बागडोर छ । त्यसलाई हामीले जनताको हातमा, स्थानीय समुदायको हातमा, हाम्रो सरकारको हातमा, त्यसमार्फत् राष्ट्रिय पूँजिको विकास । यो बाटोबाट गएर मात्रै हामीले समृद्धिको अपेक्षित परिणाम जो खोजेका छौँ, त्यो गर्न सक्छौँ ।
तर यो सजिलो छैन । यो सजिलै हुन्छ भन्ने जस्तो मेरो बुझाइ पनि छैन । तर यसको निम्ति हामीले पार्टी संरचनालाई पनि नयाँ बनाएर लैजानु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहदेखि नै मजबुत बनाएर समुदायलाई बलियो बनाउने, स्थानीय जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने किसिमले जानुपर्ने हुन्छ ।संविधान नै परिमार्जन, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता हुन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा जस्तो प्रचलन छ, त्यो प्रचलनमा रेडिकल सुधार, कमसेकम आमुल सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।त्यो गरियो भने असम्भव छैन भन्ने मेरो भनाइ हो ।
सम्भव छ । हामीले जुन परिवर्तन ल्यायौँ, ठूलो त्याग, बलिदान, युद्ध, आन्दोलन, सम्झौता, थुप्रै तरिकाद्वारा, यो परिवर्तन र यसले संस्थागत गरेको संविधान भित्र नयाँ ढंगले जाने सम्भावना छ । तर मैले जस्तो भने कि यो परिवर्तन नरुचाउने वर्ग छ । जसलाई दलाल, पूँजिपति भन्नुहोस्, सामन्तहरुको अवशेष भनौँ, वा नोकरसाही पूँजिपति भनौँ, त्यस्ता विचौलिया भनौँ, जसले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर हुन दिएको छैन । विदेशमुखी बनाउन खोजेका छन् । तिनीहरुलाई यो परिवर्तन मन परेको छैन । त्यसकारण कुनै न कुनै रुपलाई यो संविधान नै खारेज गर्न पाए, यो सिस्टमलाई नै उल्ट्याउन पाए भनेर लागिरहेका छन् एकथरी । भने हामी र अरु जो परिवर्तनका पक्षधर भनौँ वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका पक्षधर भनौँ, राष्ट्रिय पूँजिको विकास गर्ने कुराका पक्षधर, दलाल नोकसाहहरुको बिरुद्ध जानुपर्छ भन्ने पक्षधरहरु फेरि यो संविधानलाई रक्षा गर्ने, अझ परिमार्जन गर्ने विकास गर्ने र राष्ट्रिय पूँजि अपरिहार्य छ । त्यसकारण हाम्रो प्राकृति साधन, श्रोतको सदुपयोग विदेशीहरुको निम्ति होइन, हामी आफ्नै निम्ति प्रयोग गर्ने र हामीले यस्तो नीति अवलम्वन गर्ने, जसले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनओस् । विकासका ठूला कुरा त गरिए यो बीचमा, तपाईले ५०,६०,७० वर्षको इतिहास हे¥यो भने धेरै योजनाको कुरा पनि भए, विकासका कुरा पनि भए, तर स्थिती के भयो भने हे¥यो भने विदेशीको बजारमा परिणत भयो । पहिला हामी जेजे चिजमा नेपाल आत्मनिर्भर थियो, अन्नबालीमा, अहिले छैन । अर्बौंको खाद्यान्न हामी विदेशबाट भित्र्याउन पर्ने स्थिती आएको छ । कतिपय सन्दर्भमा हामी फलफूल, जडिबुटीमा त हामी आत्मनिर्भर थियौँ नै । तर अहिले त्यही पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने भयो । यो स्थिती किन भयो भन्दा हाम्रो नीतिगत त्रुटी राज्यको तर्फबाट भएको छ । मैले अहिले दस्ताबेज लेख्दै गर्दा, सच्याउन बल गर्ने पार्टीबाट पनि, सरकारतिरबाट पनि र सडकबाट पनि । त्यसकारण हामी सदन, सडक र सरकार तीनवटै मोर्चाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने । स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने छ ।
म यो कुरालाई त्यसरी हेर्दिन । जसरी पार्टी राजनीति निरन्तर परिवर्तनको प्रक्रियामा हुन्छ, ती पार्टीहरु पनि परिवर्तन हुन्छन् । यो एमाले भन्ने २०२८ सालमा कस्तो थियो ? एकदम उग्र क्रान्तिकारी, २०३८ सालमा कस्तो थियो ? परिवर्तन भएर कस्तो भयो बडो मध्यमार्गी, ०४८ सालमा कस्तो भयो, अलि बुर्जुवा, अनि ०६२÷०६३ सम्म आउँदा कस्तो भयो ? हामी सबै सहकार्य गरेर राजतन्त्रकाबिरुद्ध, सामन्तवादका बिरुद्ध लड्ने साथी, यसरी हेनुपर्छ । यसो भनिसकेको भनेर निरपेक्ष, यान्त्रिक र रुढीवादी रुपले हेर्नु भएन भन्ने मेरो पहिलो भनाइ हो । दोस्रो मैले हो, पार्टी एकता गर्ने प्रश्ताव मैले नै गरेको हो । मलाई त्यसमा पश्चाताप छैन । मैले गरेको सही नै हो भन्ने छ । किनकी त्यसबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि आउँछ, कम्युनिष्ट आन्दोलन नै बलियो हुन्छ । जनताको आर्थिक विकासको सपना पनि पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने मैले कल्पना गर्नु गल्ती हो भन्दा म कहीँ कतैबाट माप्दा पनि मैले आफूले त्रुटी गरेको देख्दिन । तेस्रो मेरो त्रुटी थिएन भन्ने कुरा दुवै तिरका आम नेता कार्यकर्ताले अनुमोदन गरे खुशीसाथ । त्यतिमात्र होइन आम नेपाली जनताले पनि तपाईहरुले ठीक गर्नुभयो भनेर दुई तिहाईको बहुमत दिए । यसले पनि त्यो अनुमोदित पनि भयो । त्यसकारण पनि त्यो गल्ती थिएन ।
र म अहिले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा, राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा, राष्ट्रिय एकताको पक्षमा छु, र मेरो प्रयास त्यतैतिर हुन्छ भन्ने कुरा पनि म प्रस्ट छु । चौथो कुरा त्यतिबेला एकता गल्ती थिएन भन्ने कुरामा मेरो के छ तर्क भने हेर्ने त राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान, दस्ताबेजहरु, अनि त्यतिबेला भएका सहमति, सम्झौताका हस्ताक्षर हेर्ने हो । सही थियो कि गलतको लागि । राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि महाधिवेशनसम्म स्थगित गरेको, छोडेको होइन । माओवाद पनि महाधिवेशनसम जाँदा टुंग्याउँदा भनेको हो, छोडेको होइन, एक । दुई, माओवादी आन्दोलनको मूल्यांकन गरिएको छ, दस्ताबेजमा यो आजको परिवर्तन मुख्य रुपमा माओवादी जनयुद्धकै कारण भएको हो, भन्नेमा केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधानसभा, विभन्न उत्पीडित वर्ग जाति, क्षेत्र, समुदायमा जो जागरण ल्याए त्यो माओवादीले नै मुख्य रुपमा ल्याएको हो भन्नेमा सहमति भएको छ । अनि मैले गल्ती गरेको हुन्छ त ? सरकार चलाउने बेलामा दुई अधयक्षले पालोपालो प्रधानमन्त्री बराबर अवधि भनेर सही गरेको डकुमेण्ट छ । मैले गल्ती गरेको हो त ? अध्यक्ष पनि महाधिवेशन नहुँदासम्म पालोपालो गर्ने भन्ने छ, कहाँ गल्ती भयो म कहीँ गल्ती नै देख्दिन ।
अब भयो के त भने केपी ओली भन्ने पात्र यस्तो पात्र रहेछन् म यतिसम्म होलान् भन्ने त्यति बेला मैले बुझेको रहेनछु भन्नुप¥यो । पहिला पनि भएको त थियो । उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा मैले प्रश्ताव गरेँ, संविधान घोषणापछि अनि बजेट आउने बित्तिकै तपाई प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो उहाँले, माधवजी, वामदेवजी, झलनाथजीले लिखित गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । यत्रो मान्छे बसेर सहमति भएपछि किन गर्नुप¥यो । ल भइहाल्यो भनेर मैले भनेँ । तर बजेट आएपछि छोड्ने त नाम निशान लिँदैनन् तिनले त ? धोका त दिए । पहिले थाहा थियो मलाई यी धोका दिने मान्छे रहेछन् भन्ने त ? तर यो पटक म किन माने भने लिखित भएको छ नि त सबै । त्यो पटक त लिखित नभएर यिनले धोका दिने मौका पाए । यो पटक त दस्ताबेज पनि लिखित छ, नेतृत्व पनि लिखित छ, सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पनि लिखित छ । भनेपनि यस्ता हुँदैन होला भनेको त त्यहाँ पनि तिनले सबै च्यातचुत पारेर हुँदाहुँदा पार्टी भित्रको बहसलाई देखाएर उनले प्रतिनिधिसभा नै संसद नै भंग गर्न पुगे । त्यसकारण यस्तो हुन्छ, इतिहासमा पनि हुने गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टी भित्रबाट नेतामा पुगेका मान्छेहरु प्रतिक्रियावादी कर्म हुने, प्रतिगमनकारी हुने र धोका दिने गर्छन् । म के ठान्दछु भने म त्यहाँ आत्मसमर्पण गरेको भए त मैले अहिले छाती खोलेर भन्न सक्दिन थिएँ । तर म अहिले भन्न सक्ने ठाएँमा छु । मैले त गलत प्रवृत्तिको बिरुद्ध लडेँ । लडेँ मात्रै होइन, जितेँ पनि हो मेरो भनाइ । मैले त जितेको हो नि, मलाई त अरुले हराए । अनौठो, अदृश्य शक्तिले हराएको हो । दृश्य शक्तिले होइन । त्यसो भएको हुनाले मलाई त्यस्तो लाग्दैन ।
पहिलो कुरा हामी आजकै देशको परिस्थितीमा विदेशी सहायता वा अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ । हामी स्वीकार गर्दै पनि आएका छौँ, लिँदै आएका छौँ । अब त्यसमा अनुदानको रुपमा हाम्रो भोतिक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति आउने सहयोगलाई त हामीले खुशीसाथ स्वीकार्न पर्दछ । स्वीकार्छौं पनि पहिलो कुरा ।
दोस्रो कुरा, तर एमसीसी प्रोजेक्टका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरु उठे, र ती गम्भीर ढंगले उठे । पहिलो कुरा त यो ओर्जिनल सहमतिमा संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने कुरा थिएन । यो बीचमा कहाँबाट आयो । किन आयो त्यहाँबाट शुरु भयो । यसको विवाद, नत्र यो पहिला विवादमा थिएन । त्यसपछि अमेरिकाको आफ्नो ग्लोवल स्टाटेजी भनौँ न, विश्वव्यापी रणनीतिको अंग हो यो भनेजस्ता प्रचारहरु आए, त्यसले पनि नयाँ बहसलाई जन्म दियो र आम जनतामा एउटा खालको पर्सेप्सन भनौँ न, बुझाइ भयो कि, एमसीसी भनेको राष्ट्रको हीतमा छैन भन्न खालको व्यापक रुपमा गयो । त्यसकारण हाम्रो भनाइ अहिले के हो त भन्दा पहिलो कुरा त यो विषयमा जहाँनेर त्रुटी भएका छन्, किनभने ओर्जिनल सहमतिबाट अर्को सहमतिमा किन लगियो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुप¥यो ।
अनि जुन जुन प्रावधानले हामीलाई अफ्ठ्यारो पार्ने जस्तो छ ती प्रावधान सच्याइनु प¥यो । त्यसलाई स्पष्ट पारिनुप¥यो । जरुरी पर्दा संशोधन पनि गर्नुप¥यो, दोस्रो कुरा । तेस्रो कुरा,यो विषय अलि गम्भीर र संवेदनशील भइ नै सकेको हुनाले राजनीतिक दलहरुको बीचमा पनि अधिकतम समझदारीको प्रयास गर्नुप¥यो । अनि राष्ट्रिय रुपमा पनि बुद्धिजीवि, पत्रकार, नागरिकहरुको पनि राय लिएर राष्ट्रिय रुपमा पनि एउटा समझदारी बनाएर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । जबरजस्ती गरियो भने यसले अफ्ठ्यारो स्थिती बन्छ भन्ने भएको हुनाले नै हामी अहिले, अस्ति देखिहाल्नुभयो । पार्टी मिटिङ प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो । त्यहाँ छलफल भयो । गठबन्धनको बैठक भयो, त्यहाँ छलफल भयो । गठबन्धनले एउटा कार्यदल बनायो ।
त्यो कार्यदलले कहाँ, कहाँ त्रुटी छ भनेर अध्ययन गर्दैछ । हिजोमात्रै त्यसको बैठक बस्यो । त्यसले गर्दैछ, फेरि १७ गते बस्दैछ, यो प्रक्रिया छ, दोस्रो । तेस्रो गठबन्धनको कुरा के छ भने मलाई लाग्दैन एमसीसीले अलिकति समय लियो नै भनेपनि वा केही सुधारको गुञ्जायस छ । प्रधानमन्त्रीजीले पनि अस्ति सर्वदलीय बैठकमा, गठबन्धनको बैठकमा पनि भन्नुभएको छ, सुधारको गुञ्जायस त छ । म पनि कोशिस गर्छु भन्नुभएको छ । त्यस्तो भयो भने एउटा भयो । मानौँ अफ्ठ्यारो नै प¥यो भने पनि एमसीसीकै कारणले गठबन्धन टुट्छ भन्ने मलाई लागेको छैन । टुट्दैन । त्यति कारणले टुट्न पनि हुँदैन र टुट्दैन, टुट्न पनि दिइँदैन भन्ने छ । हिजो मात्रै मेरो प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भयो, बुद्धिजीवि नागरिकहरुको बैठक बस्ने कि भन्ने थियो अब, हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको चाप आइसक्यो, हुन्छ नि त तपाईको सम्मेलन पछि गरौँ भनेर सहज ढंगले उहाँले सहयोगी भावना देखाउनु भयो । उहाँले पनि यो विषयलाई बुझ्नु भएको छ र अनावश्यक रुपले प्रेसर आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन ।